ဆရာငွိမျး၏ ၁၁.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၁၇.၁၁.၂၀၂၁ အထိ တဈပတျစာဟောစာတမျး
HomeKnowledgeဆရာငွိမျး၏ ၁၁.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၁၇.၁၁.၂၀၂၁ အထိ တဈပတျစာဟောစာတမျး
ဒီအပတျထဲ အပွောငျးအလဲဆိုတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အလုပျပွောငျး နရောပွောငျး၊ ရုံးခနျးပွောငျးတှေ ကွုံရလေ့ ရှိပါတယျ။ အလုပျတဈခုကနထှေကျပွီးအသဈပြိုးလုပျရတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ငှကွေေးနဲ့ ပတျသကျပွီး မိသားစုကွောငျ့ ငှကေုနျကွေးကြ မြားရတတျပါတယျ။ မိဘအတှကျ ငှကေုနျရတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါ တယျ။ အလုပျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အခကျအခဲတှကေ ကိုယျ့ကွောငျ့ထကျ ကိုယျ့အထကျလူကွီးကွောငျ့ ဖွဈရတာမြားပါ လိမျ့မယျ။
ရပျဝေးက ကိစ်စတျောတျောမြားမြား အခကျအခဲတှေ မြားရတတျပါတယျ။ အကွံအစညျ စိတျကူးကောငျး တှကေို မိမိအနနေဲ့ အမြားကို ထုတျမပွောလိုကျပါနဲ့။ သူတဈပါးက မိမိအကွံကို မိမိမလုပျခငျ အကောငျအထညျဖျော သှားတတျပါတယျ။ အလိုလိုနရေငျး စိတျညဈနလေိမျ့မယျ။ ဟိုဟာလုပျရကောငျးနိုးနိုး ၊ဒီဟာလုပျရကောငျးနိုးနိုး ဖွဈ နပေါ လိမျ့မညျ။ စိတျပနျးလူပနျး ဖွဈရတတျပါတယျ။
ကနျြးမားရေး အားနညျးတဲ့ ကာလတှပေါ။ ရခြေိုးမှားခွငျး၊ အပူ ရှပျခွငျး၊ အအေးပတျခွငျးတှေ ဖွဈလှယျပါတယျ။ အလုပျပွောငျး၊ နရောပွောငျး ကွုံရတတျသညျ။ ခရီးကိစ်စပူပနျရ တတျသညျ။ ခဈြသူဆီက အဆကျအသှယျ မလုပျတာမြိုး ကွုံရမညျ။ နီးနသေူမြား ခဈြသူ၏ နှဲ့ဆိုးဆိုးခွငျး ခံရပါလိမျ့မညျ။ လငျမယားခငျြးတော့ ပွဿနာဖွဈ စကားမြားရပါလိမျ့မယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး. ၂၊ ၇၊ ၉
ယတွာ လမျးပျေါလြှောကျသှားနသေော အရူးတဈယောကျအား အာဟာရဒါနပွုပါ။
ကံမွငျ့မားနတေတျပွီး လုပျကိုငျဆောငျရှကျသမြှ အဆငျပွခြေောမှေ့ တတျပါတယျ။ ခဈြလို့ခငျလို့ ကူညီကွသူ တှလေဲ အမြားအပွား ကွုံရတတျပါတယျ။ ရလေုပျငနျး၊ ရထှေကျကုနျနှငျ့ ကလေးပစ်စညျး အရောငျးဆိုငျမြားအရောငျး သှကျပါလိမျ့မယျ။ အညှနျ့တလူလူ တကျနတေဲ့ ကာလမို့ စီးပှားရေး အကွံအစညျသဈတှစေတငျ အကောငျအထညျဖျောလို့ ကောငျးတဲ့ကာလပါ။ မင်ျဂလာကိစ်စ၊ မတ်ေတာရေးကိစ်စ၊ အလှူအတနျးကိစ်စတှေ ဆှေးနှေးဆောငျရှကျ အကောငျအထညျ ဖျောလို့သငျ့တဲ့ကာလတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
အရငျကတညျးက အားလုံးအပျေါ မတ်ေတာထားသူတှေ ဒီကာလမှာ ပိုမို အဆငျပွနေိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ကံအကောငျးဆုံးကာလတှပေါပဲ။ စိတျခမျြးမွစေ့ရာမြား ပြျောရှငျစရာမြား ကွုံ ရပါလိမျ့မယျ။ ဘာသာရေးကိစ်စ၊ ပရဟိတကိစ်စ အထူးလုပျဖွဈ ပါလိမျ့မညျ။ အလုပျတိုးတတျခွငျး ၊တာဝနျကွီးအပေးခံရခွငျးမြိုး ကွုံရပါလိ့မျမညျ။ အထကျလူကွီး၏ ခဈြခငျခွငျးခံရမညျ။ အရေးကွီးသောကိစ်စမြား ဆောငျရှကျသငျ့တဲ့ အခြိနျပါပဲ။
ခဈြသူနှဈဦးအတှကျ ဆှတျပြံ့ကွညျနူးစရာ အကောငျးဆုံးအခြိနျပါ။ လကျဆောငျရခွငျး ၊ ကံစမျးမဲပေါကျ ခွငျးတှေ ရှိပါလိမျ့မညျ။ အိမျထောငျရေးမှာ အဆငျပွပေမေဲ့ ဆှမြေိုးတှရေဲ့ ဒုက်ခပေးခွငျးခံရမယျ။ ကနျြးမာ‌ရေးမှာတော့ ရမှေနျမှနျခြိုးပါ။ တဈကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေး ဦးစားပေးပါ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၂၊ ၆ ၊၈
ယတွာ နှငျးဆီ ၇ ပှငျ့ ဘုရားလှူပါ
စိတျကူးကောငျး၊ အကွံအစညျကောငျးတှေ ရလာတတျပါတယျ။ လုပျကိုငျဆောငျရှကျမှုတှေ မှနျသမြှ မွနျမွနျ ဆနျဆနျနဲ့ ပွီးမွောကျမှုတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အလုပျအကွှေးတှေ မြားနသေူမြား စိတျခမျြးသာရမဲ့ အခြိနျကာလပဲ ဖွဈပါတယျ။ အလုပျပိုတှေ၊ ကိစ်စပိုတှကေို မိမိအောကျလကျငယျသားတှေ အကူအညီနဲ့ဆောငျရှကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ လူခဈြလူခငျမြားနတေဲ့အတှကျ မိတျဆှတှေေ၊ ဖောကျသညျတှေ တိုးလာတတျပါတယျ။ အလုပျကောငျး နရောကောငျး တှရေလာတတျပါတယျ။ ခဈြလို့နရောပေးတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။
မိမိဝယျခငျြတဲ့ စကျပစ်စညျးတှေ၊ အိုငျတီ ပစ်စညျးတှကေို ဝယျမယျဆို ဒီအပတျမှာ ဝယျယူလို့ အထူးကောငျးပါတယျ။ အခဈြရေးကိစ်စ ရှုပျထှေးမဲ့ကာလပါ။ ငါးရံနှဈကောငျ ဖမျးခငျြသူတှအေတှကျ ဟိုမမှီ၊ ဒီမမှီ ဖွဈတတျပါတယျ။ အိမျထောငျသညျမြား စနျးပှငျ့နတေဲ့အတှကျ ဆငျခွငျပွီးနမှေ တျောကာကွပါလိမျ့မယျ။ အလုပျထဲမှာ အမြိုးသမီးကွီးတဈဦး၏ အကူအညီရမညျ။ အိမျထောငျဘကျနဲ့ စကားတကကျြကကျြ မြားရပါလိမျ့မယျ။
အလုပျစီးပှားကတော့ အထူးကောငျးနပေါတယျ။ လုပျငနျးအသဈ တှေ စတငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ စာမေးပှဲ၊ အငျတာဗြူး၊ ပညာရေးကိစ်စမြား အခကျကွုံရပါလိမျ့မယျ။ ဘုရားဖူးခရီးမြား၊ အလှူမင်ျဂလာဆောငျနဲ့ သကျဆိုငျသော ခရီးမြား ထှကျရပါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေး ဂရုစိုကျဖို့ လိုအပျတဲ့ကာလပဲ ဖွဈပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ဝ၊ ၅ ၊၆
အထူးဟော အဘကျဘကျက အဆငျပွနေမေညျ
ယတွာ သဈသီးယို ၆ မြိုး ဘုရားလှူပါ
ဒီအပတျထဲ အခကျအခဲတှေ၊ ဖိအားတှေ မြားနတောတှရေ့ပါတယျ။ အရငျကတညျးက စိတျဓာတျမာကွောသူ တှအေနနေဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ဖွတျသနျးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ တဈခု သတိထားရမှာက ဥပဒနေဲ့ မလှတျကငျးတဲ့ အလုပျ တှေ လုပျကွသူတှကေတော့ သတိထားရမဲ့ ကာလပါ။ ကွံစညျထားတာလေးတှေ တလှေဲ့လှဲနတေတျပါတယျ။ ငှကွေေး အကူအညီတှတေော့ ရလာတတျပါတယျ။ ငှကွေေးခြေးငှားရ လှယျကူတတျပါတယျ။
စိတျကူးထားသမြှ အရာထငျ အောငျမွငျဖို့ ခဏတော့သညျးခံရလိမျ့မယျ။ ရှဝေယျတာမြိုးတော့ ဒီအပတျထဲ ရှောငျစခေငျြပါတယျ။ သား သမီးအတှကျ စိတျပူပနျရတာမြိုးတှေ ဒီကာလမှာ ကွုံတှနေို့ငျပါတယျ။ ရညျမှနျးခကျြတှေ နှောငျ့နှေးတတျပါတယျ။ မိမိစိတျကူး မိမိ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အကောငျထညျဖျောဖို့ ကွနျ့ကွာပါလိမျမယျ။ ခဈြသူခငျြး နာလညျမှုတှေ လှဲနတေတျ တယျ။
အလုပျကိစ်စ၊ အငျတာဗြူးကိစ်စတှမှော အခကျအခဲ ကွုံရပါလိမျ့မယျ။ အလုပျရှာနသေူမြား အလုပျရဖို့ကွာလိမျ့ မယျ။ ဖခငျကနျြးမာရေး ညံ့တတျတဲ့အတှကျဂရုစိုကျစခေငျြပါသညျ။ အခဈြရေးမှာ ပုံမှနျမဟုတျဘဲ ခဈြသူနဲ့ ခိုးရာ လိုကျခငျြတာမြိုး စိတျကဖွဈလာရငျ မလုပျဖို့ တားခငျြပါတယျ။ အခွအေနအေဆိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၁၊ ဝ၊ ၄
အထူးဟော ကနျြးမာရေး ညံ့နသေညျ
ယတွာ ခရီးသှားမညျ့သူအား ခရီးစရိတျ တတျနိုငျသလောကျ ထောကျပံ့လိုကျပါ။
လှတျလပျမှုပေါ့ပါးမှုတှကေို ခံစားရလိမျ့မယျ။ အပြျောခရီးတှေ သှားရတာ ဘုရားဖူးခရီးတှေ သှားရတာမြိုး တှကွေုံရတတျပါတယျ။ ငှကွေေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ရပိုငျခှငျ့တှေ ရလာလိမျ့မယျ။ ထီပေါကျတာမြိုး၊ ကံစမျးမဲပေါကျတာ မြိုးတှေ ကွုံနရေတတျပါတယျ။ အမှုအခငျး၊ အခြုပျအနှောငျကွုံနရေသူတှေ ဒီကာလမှာ ဖွရှေငျးဖို့ လှယျကူသှားပါ လိမျ့မယျ။ သတိထားရမှာက ဆရာအတုအယောငျတှနေဲ့ တှတေ့တျပါတယျ။ မိမိကို ပိပိရိရိ လိမျလညျတာမြိုးတှေ ကွုံ ရတတျပါတယျ။
သားသမီးတှေ အဆငျမပွလေို့ ငှကွေေးထောကျပံ့ရတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသားတှရေဲ့ ခဈြခငျမှု၊ လေးစားမှု၊ အမိနျ့နာခံမှုကို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ ရစေကျခပြှဲ ၊အလှူပှဲမြား ကငျြးပနိုငျပါလိမျ့ မယျ။ ခငျြ့ခြိနျ စဉျးစားပွီးမှ ဘာမဆို ရှေးတိုးဆောငျရှကျပါ။ အရေးကွီးသောကိစ်စ ၊ စာခြုပျစာတမျးကိစ်စတှအေတှကျ ရကျရှသေ့ငျ့ပါတယျ။
လုပျငနျးစီးပှား အနှောကျအယှကျ တှလေိ့မျ့မယျ။ လုပျငနျးပွိုငျတှရေဲ့ သှားပုပျလလှေငျ့ ပွောဆို ခွငျး ခံရမညျ။ ငှကေုနျကွေးကြ မြားတတျသညျ။ မိမိစုဆောငျးထားသော ငှမြေား ထုတျသုံးရသညျအထိ ငှပွေတျသှား လိမျ့မညျ။ ခဈြသူနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျတာနဲ့ စကားမြားရလိမျ့မညျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၃၊ ၈၊ ၄
အထူးဟော အကွံအစညျ ပကျြတတျသညျ။
ယတွာ သွဇာညှနျ့ ၄ ညှနျ့ ဘုရားလှူပါ
နားလညျထားသမြှ၊ မိမိတကျကြှမျးသမြှတှကေို အစှမျးကုနျထုတျသုံးပွီး အောငျမွငျအောငျ လုပျသငျ့တဲ့ကာလ ပါပဲ။ ငှကွေေးနဲ့ စာရငျးဇယားတှေ ကောငျးစှာကိုငျတှယျ နိုငျပါလိမျ့မယျ။ အလုပျစီးပှားတှေ တိုးတတျနိုငျတာမို့ မိမိက အစှမျးကုနျ စိတျနှဈပွီး လုပျကိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ တစိမျးအမြိုးသမီးတှရေဲ့ အကူအညီတှေ ရလာနိုငျပါတယျ။ ဇိမျခံပစ်စညျးမြား လကျဆောငျ ရလာတတျပါတယျ။ ဝနျထမျးအလုပျ ရာထူးတိုးတတျမညျ။
လုပျငနျးမြားခြဲ့ထှငျ နိုငျမညျ။ အလုပျမှ အကြိုးအမွတျ ရလိမျ့မယျ။ အဘကျဘကျမှ ငှဝေငျလိမျ့မယျ။ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနှေငျ့ အဆငျပွမေညျ။ စိတျကူးထားသော ၊ကွံစညျထားသောကိစ်စမြား လကျတှေ့ အကောငျအထညျဖျောသငျ့တဲ့ ကာလ ထဲပါ။ အာမခံတာ ၊တာဝနျ ယူတာ ၊အသငျးအဖှဲ့ ငှတှေေ လကျခံတာမြိုး မလုပျပါနဲ့ ပွဿနာ တတျပါလိမျ့မယျ။ မိတျဆှတှေရေဲ့အကူအညီဖွငျ့ လုပျငနျးစီးပှား တိုးတတျမညျ။
အထကျလူကွီး၏ ထောကျခံမှုဖွငျ့ အလုပျတှငျရာထူး တိုးမညျ။ အိမျထောငျရေးသာယာ မညျ။ အိမျထောငျသညျ မြားခွမေရှုပျပါနှငျ့။ ခဈြသူနဲ့ သှေးအေး နလေိမျ့မယျ။ ခဈြသူ မရှိသေးသူမြား ခဈြသူနဲ့ဝေးနေ သူမြား ခဈြသူသဈရ လိမျ့မညျ။ စနျးပှငျ့နသေောကွောငျ့ ခဈြရေးဆိုခွငျးခံရလိမျ့မညျ။ ထီဝါသနာပါသူမြား ထီထိုး သငျ့တဲ့ကာလပါပဲ။ ၂၊ ၄ မြားမြား ပါသော ထီဂဏနျး ရှေးထိုးပါ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ ခှဲခှာနရေသော သူငယျခငျြးနှငျ့ ပွနျဆုံတတျ သညျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၂၊ ၈၊ ၄
အထူးဟော ကံအထူးကောငျး နပေါလိမျ့မယျ
ယတွာ နံနကျစောစော အရုဏျဆှမျး ထလောငျးလှူပါ
အကွံအစညျ ပကျြလှယျသညျ။ ကနျြးမားရေး အားနညျးနသေညျ။ ဗိုကျအောကျ၊ ဗိုကျနာ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဘာကိစ်စပဲကွုံကွုံ အလငျြစလို မဆုံးဖွတျပါနှငျ့။ ကိုယျတိုငျဆုံးဖွတျခွငျးထကျ သူမြားဆီက အကွံဉာဏျယူပွီး ဆုံးဖွတျရမဲ့ ကာလ ပါ။ ခဈြသူနဲ့ စိတျဝမျးကှဲပါလိမျ့မယျ။ ခဈြသူခငျြး ခှဲခှာနရေတတျပါသညျ။ အဆကျအသှယျ မလုပျတဲ့ ခဈြသူကွောငျ့ စိတျညဈရပါလိမျ့မယျ။ သတိရစရာ လှမျးဆှတျစရာတှေ ပွညျ့နှကျနမေဲ့ ကာလပါ။ အလုပျအသဈ မစတငျပါ နှငျ့။
အလုပျထဲမှာ မိမိကို မနာလိုသူတှေ အုပျစုဖှဲ့ ခြောကျခတြာမြိုး ကွုံရတတျတဲ့အတှကျ သတိရှိပါ။ လှုပျရှားမှုမြားမဲ့ ကာလတှပေါ။ အငွိမျမနရေ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ မိသားစုအတှငျး စိတျခမျြးသာစရာ ကိစ်စမြား ဖွဈပျေါမညျ။ အလုပျပိုတှေ ၊လူမှုရေးကိစ်စတှကွေောငျ့ မနားရမဲ့ ကာလပါ။ ငှမေခြေးပါနှငျ့။ အားနာလို့၊ လူရငျး မို့လို့ဆိုပွီး ငှေ ခြေးပါက ဆုံးတတျပါသညျ။
အလုပျပွောငျးရ ၊ဌာနပွောငျး တာမြိုး ကွုံရတတျပါတယျ။ လူရငျးတှေ ၊ အနီးကပျ မိတျဆှေ တှရေဲ့ ဒုက်ခပေးခွငျးကို ခံရပါလိမျ့မယျ။သူတဈပါး ပွဿနာကွားဝငျ ဖွရှေငျး ရပါလိမျ့မညျ။ အလုပျနဲ့ ပတျသကျပွီး ခရီးယာယီ ကွုံရတတျသညျ။ မိသားစုအတှငျး တဈယောကျတဈပေါကျ ဖွဈ နလေိမျ့မညျ။ မောငျနှမ အခငျြးခငျြး စိတျဝမျးကှဲလိမျ့မညျ။ မနိုငျဝနျထမျးရမဲ့ ကာလပါ။ အလုပျဝနျ ပိနပေါလိမျ့မယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၃၊ ၆၊ ၇
ယတွာ ရဟနျးတဈပါးကို အားဆေးတဈဘူး လှူလိုကျပါ။
၇ ရကျသားသမီးအပေါငျး ရနျသူမြိုး ငါးပါးဘေးမှ ကငျးဝေးနိုငျကွပါစေ
ဆရာငြိမ်း၏ ၁၁.၁၁.၂၀၂၁ မှ ၁၇.၁၁.၂၀၂၁ အထိ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ဒီအပတ်ထဲ အပြောင်းအလဲဆိုတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြောင်း နေရာပြောင်း၊ ရုံးခန်းပြောင်းတွေ ကြုံရလေ့ ရှိပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကနေထွက်ပြီးအသစ်ပျိုးလုပ်ရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိသားစုကြောင့် ငွေကုန်ကြေးကျ များရတတ်ပါတယ်။ မိဘအတွက် ငွေကုန်ရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါ တယ်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲတွေက ကိုယ့်ကြောင့်ထက် ကိုယ့်အထက်လူကြီးကြောင့် ဖြစ်ရတာများပါ လိမ့်မယ်။
ရပ်ဝေးက ကိစ္စတော်တော်များများ အခက်အခဲတွေ များရတတ်ပါတယ်။ အကြံအစည် စိတ်ကူးကောင်း တွေကို မိမိအနေနဲ့ အများကို ထုတ်မပြောလိုက်ပါနဲ့။ သူတစ်ပါးက မိမိအကြံကို မိမိမလုပ်ခင် အကောင်အထည်ဖော် သွားတတ်ပါတယ်။ အလိုလိုနေရင်း စိတ်ညစ်နေလိမ့်မယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုး ၊ဒီဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုး ဖြစ် နေပါ လိမ့်မည်။ စိတ်ပန်းလူပန်း ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။
ကျန်းမားရေး အားနည်းတဲ့ ကာလတွေပါ။ ရေချိုးမှားခြင်း၊ အပူ ရှပ်ခြင်း၊ အအေးပတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြောင်း၊ နေရာပြောင်း ကြုံရတတ်သည်။ ခရီးကိစ္စပူပန်ရ တတ်သည်။ ချစ်သူဆီက အဆက်အသွယ် မလုပ်တာမျိုး ကြုံရမည်။ နီးနေသူများ ချစ်သူ၏ နွဲ့ဆိုးဆိုးခြင်း ခံရပါလိမ့်မည်။ လင်မယားချင်းတော့ ပြဿနာဖြစ် စကားများရပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း. ၂၊ ၇၊ ၉
ယတြာ လမ်းပေါ်လျှောက်သွားနေသော အရူးတစ်ယောက်အား အာဟာရဒါနပြုပါ။
ကံမြင့်မားနေတတ်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သမျှ အဆင်ပြေချောမွေ့ တတ်ပါတယ်။ ချစ်လို့ခင်လို့ ကူညီကြသူ တွေလဲ အများအပြား ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ရေလုပ်ငန်း၊ ရေထွက်ကုန်နှင့် ကလေးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များအရောင်း သွက်ပါလိမ့်မယ်။ အညွှန့်တလူလူ တက်နေတဲ့ ကာလမို့ စီးပွားရေး အကြံအစည်သစ်တွေစတင် အကောင်အထည်ဖော်လို့ ကောင်းတဲ့ကာလပါ။ မင်္ဂလာကိစ္စ၊ မေတ္တာရေးကိစ္စ၊ အလှူအတန်းကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက် အကောင်အထည် ဖော်လို့သင့်တဲ့ကာလတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကတည်းက အားလုံးအပေါ် မေတ္တာထားသူတွေ ဒီကာလမှာ ပိုမို အဆင်ပြေနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကံအကောင်းဆုံးကာလတွေပါပဲ။ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများ ပျော်ရွှင်စရာများ ကြုံ ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးကိစ္စ၊ ပရဟိတကိစ္စ အထူးလုပ်ဖြစ် ပါလိမ့်မည်။ အလုပ်တိုးတတ်ခြင်း ၊တာဝန်ကြီးအပေးခံရခြင်းမျိုး ကြုံရပါလိ့မ်မည်။ အထက်လူကြီး၏ ချစ်ခင်ခြင်းခံရမည်။ အရေးကြီးသောကိစ္စများ ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။
ချစ်သူနှစ်ဦးအတွက် ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးစရာ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။ လက်ဆောင်ရခြင်း ၊ ကံစမ်းမဲပေါက် ခြင်းတွေ ရှိပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေပေမဲ့ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ ဒုက္ခပေးခြင်းခံရမယ်။ ကျန်းမာ‌ရေးမှာတော့ ရေမှန်မှန်ချိုးပါ။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ဦးစားပေးပါ။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂၊ ၆ ၊၈
ယတြာ နှင်းဆီ ၇ ပွင့် ဘုရားလှူပါ
စိတ်ကူးကောင်း၊ အကြံအစည်ကောင်းတွေ ရလာတတ်ပါတယ်။ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ မှန်သမျှ မြန်မြန် ဆန်ဆန်နဲ့ ပြီးမြောက်မှုတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်အကြွေးတွေ များနေသူများ စိတ်ချမ်းသာရမဲ့ အချိန်ကာလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ပိုတွေ၊ ကိစ္စပိုတွေကို မိမိအောက်လက်ငယ်သားတွေ အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လူချစ်လူခင်များနေတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတွေ၊ ဖောက်သည်တွေ တိုးလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ကောင်း နေရာကောင်း တွေရလာတတ်ပါတယ်။ ချစ်လို့နေရာပေးတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
မိမိဝယ်ချင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ၊ အိုင်တီ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်မယ်ဆို ဒီအပတ်မှာ ဝယ်ယူလို့ အထူးကောင်းပါတယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စ ရှုပ်ထွေးမဲ့ကာလပါ။ ငါးရံနှစ်ကောင် ဖမ်းချင်သူတွေအတွက် ဟိုမမှီ၊ ဒီမမှီ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်များ စန်းပွင့်နေတဲ့အတွက် ဆင်ခြင်ပြီးနေမှ တော်ကာကြပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး၏ အကူအညီရမည်။ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ စကားတကျက်ကျက် များရပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်စီးပွားကတော့ အထူးကောင်းနေပါတယ်။ လုပ်ငန်းအသစ် တွေ စတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စာမေးပွဲ၊ အင်တာဗျူး၊ ပညာရေးကိစ္စများ အခက်ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားဖူးခရီးများ၊ အလှူမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ သက်ဆိုင်သော ခရီးများ ထွက်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ကာလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ဝ၊ ၅ ၊၆
အထူးဟော အဘက်ဘက်က အဆင်ပြေနေမည်
ယတြာ သစ်သီးယို ၆ မျိုး ဘုရားလှူပါ
ဒီအပတ်ထဲ အခက်အခဲတွေ၊ ဖိအားတွေ များနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အရင်ကတည်းက စိတ်ဓာတ်မာကြောသူ တွေအနေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ဖြတ်သန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခု သတိထားရမှာက ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ အလုပ် တွေ လုပ်ကြသူတွေကတော့ သတိထားရမဲ့ ကာလပါ။ ကြံစည်ထားတာလေးတွေ တေ့လွဲလွဲနေတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေး အကူအညီတွေတော့ ရလာတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးချေးငှားရ လွယ်ကူတတ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးထားသမျှ အရာထင် အောင်မြင်ဖို့ ခဏတော့သည်းခံရလိမ့်မယ်။ ရွှေဝယ်တာမျိုးတော့ ဒီအပတ်ထဲ ရှောင်စေချင်ပါတယ်။ သား သမီးအတွက် စိတ်ပူပန်ရတာမျိုးတွေ ဒီကာလမှာ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေ နှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်။ မိမိစိတ်ကူး မိမိ မျှော်လင့်ချက်တွေ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ကြန့်ကြာပါလိမ်မယ်။ ချစ်သူချင်း နာလည်မှုတွေ လွဲနေတတ် တယ်။
အလုပ်ကိစ္စ၊ အင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာ အခက်အခဲ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ရှာနေသူများ အလုပ်ရဖို့ကြာလိမ့် မယ်။ ဖခင်ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်တဲ့အတွက်ဂရုစိုက်စေချင်ပါသည်။ အချစ်ရေးမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ချစ်သူနဲ့ ခိုးရာ လိုက်ချင်တာမျိုး စိတ်ကဖြစ်လာရင် မလုပ်ဖို့ တားချင်ပါတယ်။ အခြေအနေအဆိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၁၊ ဝ၊ ၄
အထူးဟော ကျန်းမာရေး ညံ့နေသည်
ယတြာ ခရီးသွားမည့်သူအား ခရီးစရိတ် တတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့လိုက်ပါ။
လွတ်လပ်မှုပေါ့ပါးမှုတွေကို ခံစားရလိမ့်မယ်။ အပျော်ခရီးတွေ သွားရတာ ဘုရားဖူးခရီးတွေ သွားရတာမျိုး တွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရပိုင်ခွင့်တွေ ရလာလိမ့်မယ်။ ထီပေါက်တာမျိုး၊ ကံစမ်းမဲပေါက်တာ မျိုးတွေ ကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ အမှုအခင်း၊ အချုပ်အနှောင်ကြုံနေရသူတွေ ဒီကာလမှာ ဖြေရှင်းဖို့ လွယ်ကူသွားပါ လိမ့်မယ်။ သတိထားရမှာက ဆရာအတုအယောင်တွေနဲ့ တွေ့တတ်ပါတယ်။ မိမိကို ပိပိရိရိ လိမ်လည်တာမျိုးတွေ ကြုံ ရတတ်ပါတယ်။
သားသမီးတွေ အဆင်မပြေလို့ ငွေကြေးထောက်ပံ့ရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့ ချစ်ခင်မှု၊ လေးစားမှု၊ အမိန့်နာခံမှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ရေစက်ချပွဲ ၊အလှူပွဲများ ကျင်းပနိုင်ပါလိမ့် မယ်။ ချင့်ချိန် စဉ်းစားပြီးမှ ဘာမဆို ရှေးတိုးဆောင်ရွက်ပါ။ အရေးကြီးသောကိစ္စ ၊ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေအတွက် ရက်ရွေ့သင့်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းစီးပွား အနှောက်အယှက် တွေ့လိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းပြိုင်တွေရဲ့ သွားပုပ်လေလွင့် ပြောဆို ခြင်း ခံရမည်။ ငွေကုန်ကြေးကျ များတတ်သည်။ မိမိစုဆောင်းထားသော ငွေများ ထုတ်သုံးရသည်အထိ ငွေပြတ်သွား လိမ့်မည်။ ချစ်သူနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ စကားများရလိမ့်မည်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၃၊ ၈၊ ၄
အထူးဟော အကြံအစည် ပျက်တတ်သည်။
ယတြာ သြဇာညွှန့် ၄ ညွှန့် ဘုရားလှူပါ
နားလည်ထားသမျှ၊ မိမိတက်ကျွမ်းသမျှတွေကို အစွမ်းကုန်ထုတ်သုံးပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်သင့်တဲ့ကာလ ပါပဲ။ ငွေကြေးနဲ့ စာရင်းဇယားတွေ ကောင်းစွာကိုင်တွယ် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်စီးပွားတွေ တိုးတတ်နိုင်တာမို့ မိမိက အစွမ်းကုန် စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ တစိမ်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အကူအညီတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ လက်ဆောင် ရလာတတ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအလုပ် ရာထူးတိုးတတ်မည်။
လုပ်ငန်းများချဲ့ထွင် နိုင်မည်။ အလုပ်မှ အကျိုးအမြတ် ရလိမ့်မယ်။ အဘက်ဘက်မှ ငွေဝင်လိမ့်မယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနှင့် အဆင်ပြေမည်။ စိတ်ကူးထားသော ၊ကြံစည်ထားသောကိစ္စများ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်သင့်တဲ့ ကာလ ထဲပါ။ အာမခံတာ ၊တာဝန် ယူတာ ၊အသင်းအဖွဲ့ ငွေတွေ လက်ခံတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ ပြဿနာ တတ်ပါလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီဖြင့် လုပ်ငန်းစီးပွား တိုးတတ်မည်။
အထက်လူကြီး၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် အလုပ်တွင်ရာထူး တိုးမည်။ အိမ်ထောင်ရေးသာယာ မည်။ အိမ်ထောင်သည် များခြေမရှုပ်ပါနှင့်။ ချစ်သူနဲ့ သွေးအေး နေလိမ့်မယ်။ ချစ်သူ မရှိသေးသူများ ချစ်သူနဲ့ဝေးနေ သူများ ချစ်သူသစ်ရ လိမ့်မည်။ စန်းပွင့်နေသောကြောင့် ချစ်ရေးဆိုခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ထီဝါသနာပါသူများ ထီထိုး သင့်တဲ့ကာလပါပဲ။ ၂၊ ၄ များများ ပါသော ထီဂဏန်း ရွေးထိုးပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခွာနေရသော သူငယ်ချင်းနှင့် ပြန်ဆုံတတ် သည်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂၊ ၈၊ ၄
အထူးဟော ကံအထူးကောင်း နေပါလိမ့်မယ်
ယတြာ နံနက်စောစော အရုဏ်ဆွမ်း ထလောင်းလှူပါ
အကြံအစည် ပျက်လွယ်သည်။ ကျန်းမားရေး အားနည်းနေသည်။ ဗိုက်အောက်၊ ဗိုက်နာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကိစ္စပဲကြုံကြုံ အလျင်စလို မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းထက် သူများဆီက အကြံဉာဏ်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်ရမဲ့ ကာလ ပါ။ ချစ်သူနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူချင်း ခွဲခွာနေရတတ်ပါသည်။ အဆက်အသွယ် မလုပ်တဲ့ ချစ်သူကြောင့် စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်။ သတိရစရာ လွမ်းဆွတ်စရာတွေ ပြည့်နှက်နေမဲ့ ကာလပါ။ အလုပ်အသစ် မစတင်ပါ နှင့်။
အလုပ်ထဲမှာ မိမိကို မနာလိုသူတွေ အုပ်စုဖွဲ့ ချောက်ချတာမျိုး ကြုံရတတ်တဲ့အတွက် သတိရှိပါ။ လှုပ်ရှားမှုများမဲ့ ကာလတွေပါ။ အငြိမ်မနေရ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုအတွင်း စိတ်ချမ်းသာစရာ ကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ အလုပ်ပိုတွေ ၊လူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့် မနားရမဲ့ ကာလပါ။ ငွေမချေးပါနှင့်။ အားနာလို့၊ လူရင်း မို့လို့ဆိုပြီး ငွေ ချေးပါက ဆုံးတတ်ပါသည်။
အလုပ်ပြောင်းရ ၊ဌာနပြောင်း တာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ လူရင်းတွေ ၊ အနီးကပ် မိတ်ဆွေ တွေရဲ့ ဒုက္ခပေးခြင်းကို ခံရပါလိမ့်မယ်။သူတစ်ပါး ပြဿနာကြားဝင် ဖြေရှင်း ရပါလိမ့်မည်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခရီးယာယီ ကြုံရတတ်သည်။ မိသားစုအတွင်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဖြစ် နေလိမ့်မည်။ မောင်နှမ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲလိမ့်မည်။ မနိုင်ဝန်ထမ်းရမဲ့ ကာလပါ။ အလုပ်ဝန် ပိနေပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၃၊ ၆၊ ၇
ယတြာ ရဟန်းတစ်ပါးကို အားဆေးတစ်ဘူး လှူလိုက်ပါ။
၇ ရက်သားသမီးအပေါင်း ရန်သူမျိုး ငါးပါးဘေးမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ